Mycroft IA, Siri kana Cortana yeLinux | Linux Vakapindwa muropa
Mycroft AI chirongwa chakavhurwa chemari pamapuratifomu anozivikanwa nevanhu uye anoedza kuunza kucherechedzwa kwezwi nehungwaru hwekunyepera uku uchiremekedza uzivi hwesimba. Muchokwadi, rave rekutanga rekunyepedzera ungwaru chikuva chekushandisa yakavhurika sosi yeayo software uye zvakare ye Hardware.
Iye zvino vagadziri veMycroft vanga vachishanda nesimba kuti chinja maitiro ekuziva ekutaura kune iyo Linux chikuva, uye vakatotora matanho ekutanga kuti vadaro. Izvi zvinogona kunonoka, sezvo kugoverwa kweLinux kwave kutove nemapurojekiti akatsigirwa ekuzivikanwa kwekutaura, asi mapurojekiti aya akaramba ari mumatanho ekutanga ebudiriro pasina budiriro yakawanda.
Mune chikamu ichi, Linux kernel-based masisitimu ari kumashure kumashure Microsoft uye Apple anoshanda masisitimu. Iyo Cortana uye Siri masisitimu, zvichiteerana, akakura kwazvo uye akafambira mberi maererano nemashandiro, zvisinei muLinux hakuna chirongwa chakadai kusvika parizvino. Mycroft inozochinja izvi uye ipe akadaro akachenjera masisitimu masisitimu ane kuzivikanwa kwenzwi mukana.
Iyo Hardware yeMycroft inoshandisa yakavakirwa paRaspberry Pi bhodhi, ichibvumidza kwete chete kuzivikanwa kwenzwi uye ruzivo rwekupa seSiri naCortana, inogona zvakare kudzora otomatiki imba, mamwe mapurojekiti emagetsi uye kunyangwe mutongi anogona weIoT. Uine chete iyi bhodhi reSBC iwe unowana rakaringana rakaringana uye yepamusoro system, asi kana ikakwanisa kumhanya pane desktop desktop kana nhare mbozha zvingave zviri nani.
Mune ino yekupedzisira nhanho, ivo vanogadzira vari kushanda nemushandirapamwe mutsva kuti vakwanise kuimhanyisa paLinux uye zvinoita sekunge vakabudirira, kunyangwe ichigere kugadzirira veruzhinji. Chekutanga tanga nekuibatanidza muUbatanidzwa hweUbuntu uye zvakare mu KDE. Basa harina kutanga paGNOME parizvino, asi ivo vari kuita hurukuro nevatungamiriri veichi chirongwa kuti vauye nacho kudesktop ino uye kune vamwe mune ramangwana ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Mycroft AI ikozvino inogona kumhanya paLinux